आईफोन एक्ससँग पहिले नै चिनियाँ क्लोन छ र यसको लागत e०० भन्दा कम छ ग्याजेट समाचार
यसलाई इन्कार गर्ने कुनै कुरा छैन: एप्पलले आफ्नो कम्प्युटरमा प्रस्ताव गर्ने डिजाईन ईर्ष्याको कारण हो। अर्कोतर्फ, कपर्टिनोको ती धेरै पटक प्रतिलिपि हुन्छ। सायद सबैभन्दा प्रसिद्ध मामला सियोमीकै हो, यसको चिनियाँ कम्पनीहरूमध्ये एक, यसको देश भित्र र विदेश दुवैतिर। यद्यपि, अब अर्को एसियाली कम्पनीसँग सामेल हुन्छ जुन बजारमा पहिले नै धेरै मोडेलहरू छन् र जुन यस क्षेत्रको सन्दर्भ मोडेलको डिजाइन बिना हिचकिचाउने अनुसरण गर्दछ। बारेमा लीग.
आईफोन एक्स एप्पलको पछिल्लो मोडेल हो। यसको डिजाइन आकर्षक र उल्लेखनीय छ; यसको मूल्य यति धेरै छैन। त्यसैले ती अनुभूतिहरूलाई एकल टर्मिनलमा एकजुट गर्नेले लीगुले चाँडै नै सर्वसाधारणलाई देखाउन चाहेको कुरा हासिल गर्दछ। उसको नाम हो लीगू S9, पहिलो कपर्टिनो तरवारको चिनियाँ क्लोन, एन्ड्रोइडमा आधारित छ र त्यो हो, यसको मूल्य मूल मोडल संग केहि गर्न छैन।
पोर्चुगल द्वारा लीगू S9 अनावरण गरिएको छ एन्ड्रोइड हेडलाइनहरू। स्पष्ट रूपमा, चीनबाट आएको यो नयाँ टोली चाँडै नै सुरूवात हुनेछ र स्पष्ट रूपमा आईफोन एक्सको सम्पूर्ण डिजाइन प्रतिलिपि गर्दछ। यस टर्मिनलबाट के अपेक्षा गर्ने? सिकेको छ, को को स्क्रीन लीगु एस मा एमोलेड टेक्नोलोजी पनि हुनेछ र यसको साइज9इन्च हुनेछ विकर्ण १ 18: of को पक्ष अनुपातको साथ र शीर्ष मा "अड्च" वा टापुको साथ।
अर्कोतर्फ, हामी आफैंलाई मूर्ख बनाउन सक्दैनौं, यो एक टोली हुनेछ जुन सेक्टरको मध्य दायरा भित्र प्रतिस्पर्धा गर्दछ। यसले मान्दछ कि प्रोसेसरले यसलाई लिन्छ मिडियाटेक P40 Q क्वालकम स्नैपड्रैगन 670— का एक सीधा प्रतिस्पर्धी र त्यो एक साथ हुनेछ १GB जीबी र्याम। अर्कोतर्फ, यसको भण्डारण ठाउँ १२128 जीबी भन्दा कम र पछाडि हुनेछैन एक डुअल क्यामेरा हुनेछ आईफोन X— को जस्तै स्थितिमा १ me मेगापिक्सेल सेन्सरहरू सहित।
न त एन्ड्रोइडको संस्करण स्थापना हुनेछ कि न त यसको वास्तविक मूल्य थाहा छ। यद्यपि यो अनुमान गरिएको छ कि यसको लागि भुक्तानी गर्ने रकम हुनेछ 300 भन्दा कम यूरो; त्यो हो, मूल्य तपाईंले प्रतिलिपि गरेको मोडेल भन्दा times गुणा कम।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » टेलिफोनी » मोबाईलहरू » आईफोन एक्ससँग पहिले नै चिनियाँ क्लोन छ र यसको लागत 300०० भन्दा कम छ